खेलकुद – Page3– shubhabihani
Home / खेलकुद (page 3)
विश्वकप क्रिकेट एसियाली छनोटमा नेपाल हङकङसँग ६ विकेटले पराजित
काठमाडौँ: आइसिसी महिला विश्व कप क्रिकेटको एसियाली छनोटको पहिलो खेलमा नेपाल ६ विकेटले पराजित भएको छ।
मिसन रोड मैदानमा आइतबार भएको पहिलो खेलमा नेपाली टोली आयोजक हङकङसँग ६ विकेटले पराजित भएको हो ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले १९ दशमलव २ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ७७ रन मात्रै बनायो ।
सुरुवात नै खराब गरेको नेपालका लागि निर्मला कुमारी शाहीले १८, कप्तान रुबिना क्षेत्रीले १२ तथा रश्मि चौलागाईंले ११ रन बनाउनु बाहेक अरुले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।
हङकङले ७८ रनको लक्ष्य १६ दशमलव ३ ओभरमा चार विकेट गुमाएर भेट्टायो । हङकङका लागि जि वान यिपले ३३ तथा याश्मिन दस्वानीले १३ रन बनाइन् । नेपालकी निर्मला कुमारी शाहीले दुई विकेट लिइन् ।
प्रतियोगितामा आयोजक हङकङसहित नेपाल, चीन र थाइल्याण्ड सहभागी छन् । डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा भएको प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले विश्वभरिका टिम सहभागी हुने छनौट प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछ ।
नेपालमाथिको प्रतिवन्ध ९ महिनाभित्र हट्ने, सल्लाहकार समिति बनाउने आइसीसीको घोषणा
१८ भदौ, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)ले नेपाल क्रिकेट सघंमाथि लगाएको आगामी नौ महिनाभित्र प्रतिवन्ध हट्ने बताएको छ । यो अवधिमा क्रिकेट संघको विधान पुनरावलोन गरी नयाँ निर्वाचन गरिस क्ने उसको लक्ष्य छ ।
आईसीसीले क्रिकेट संघको विधान पुनरावलोनका लागि सल्लाहकार समिति गठनको घोषणा गरेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका आइसीसीका सीइओ डेभिड रिचर्डसनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सल्लाहकार समिति गठनको जानकारी दिएका हुन् ।
समितिमा रहनेहरुको नाम भने दुई साताभित्र घोषणा गरिने छ । यसको नेतृत्व अहिले अमर शेखले गर्नेछन् । आइसीसीका तत्कालीन ग्लोबल डाइरेक्टर टिम एण्डरसनको स्थानमा अर्को व्यक्ति आएपछि उनले यसको नेतृत्व गर्नेछन् ।
सल्लाहकार समितिमासरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र क्रिकेटका सरोकारबाला पक्ष रहनेछन् । र, यसले क्यानको वर्तमान विधान पुनरावलानेकन गरी संशोधन गर्ने कि नयाँ ल्याउने भनेर आइसीसीलाई सुझाव दिने रिचर्डसनले बताए ।
सरकारले भने क्रिकेट विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको छ । आइतबार विहान प्रधानमन्त्रीसहितको छलफलमा खेलकुदमन्त्रीले आइसीसीसामू यो प्रस्ताव राखेका थिए । र, आइसीसी यसप्रति सकारात्मक रहेको मन्त्री श्रीपाइलीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
आईसीसीले नयाँ चुनावलाई मदत गर्ने सीइओ रिचर्डसनले बताए । उनले भने, जुन २०१७ मा नेपालमा क्रिकेट नर्मल हुने गरी काम गर्छौं । नयाँ कमिटी आएपछि मात्र निलम्बन हट्छ ।’
नेपाली क्रिकेटमा विवाद देखिएपछि आईसीसीले झण्डै चार महिनाअघि निलम्बन गरेको थियो ।
इंग्ल्यान्डका कप्तान इयान मोर्गनले सोधे– नेपालको म्याच कहिले छ ? इंग्ल्यान्डलाई सुशनको गुगली
भाद्र १८, २०७३- न्युक्वुविरुद्ध शनिबार उनीहरूकै मैदानमा सटरडे लिगमा उत्रिँदा नेपालका युवा स्पिनर सुशन भारीको जोस छुट्टै हुनेछ । दुई महिनाअघि इंग्ल्यान्ड गएका उनले सोमबार पृथक् अनुभव बटुलेका थिए, जुन सम्भवत: उनले जीवनभर भुल्ने छैनन् ।
नेपाल क्रिकेट खेलाडी संघको पहलमा सुशन कोर्नवाल क्रिकेट लिगका लागि फालमाउथ क्रिकेट क्लबबाट खेल्न इंग्ल्यान्ड गएका थिए । उनले फालमाउथबाट ७ म्याच खेलिसकेका छन् । त्यसमा दुई वर्षाले बिथोलेको छ । ५ दिनअघि भने उनले पाकिस्तानसँगको तेस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलको तयारी गरिरहेको इंग्ल्यान्डका ब्याट्सम्यानलाई बलिङ गर्न पाएका थिए ।
फालमाउथका प्रशिक्षक सिन हुपरले २२ वर्षे सुशनलाई त्यो अवसर मिलाइदिएका थिए । इंग्ल्यान्ड र पाकिस्तानबीचको उक्त खेल नर्टिङघमको ट्रेन्टब्रिजमा भएको थियो । हुपरलाई नर्टिङघममा रहेका आफ्ना साथीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी छ, स्पिन बलिङ गर्छ
भनेपछि आफूलाई इंग्ल्यान्डको क्याम्पमा बलिङ गर्न बोलाइएको सुशन बताउँछन् । इंग्ल्यान्डका ब्याट्सम्यानलाई सुशनले २ घन्टा बलिङ गरेका थिए ।
इंग्ल्यान्डले उक्त खेलमा ४ सय ४४ रन बनाएर एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा विश्व कीर्तिमान बनाएको थियो । एलेक्स हेल्सले १ सय ७१ रन बनाई इंग्ल्यान्डबाट सर्वोच्च स्कोर बनाउने कीर्तिमान बनाएका थिए । जोस बटलरले २२ बलमै अर्धशतक बनाएका थिए । यो इंग्ल्यान्डका ब्याट्सम्यानले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा बनाएको सबैभन्दा तीव्र अर्धशतक हो ।
‘हेल्सले नेट्समा ब्याटिङ सकाइसकेका थिए । त्यसपछि मैले इयान मोर्गन, जेसन रोय, बटलर, बेन स्टोक्स र मोइन अलीलाई बलिङ गरेको थिएँ । मोर्गनलाई आउट पनि गरें । त्यहाँको अफिसियलले राम्रो छ अभ्यास गरिरहनु भने,’ सुशनले भने, ‘मोर्गनले नेपालको म्याच कहिले छ भनेर सोधे ।’
मोर्गनले आयरल्यान्डको कप्तानी गर्दै सन् २००६ मा नेपालविरुद्ध श्रीलंकामा आईसीसी यू–१९ विश्वकपमा खेलेका थिए । उनले ८६ रन बनाए पनि आयरल्यान्डसँगको खेल नेपालले ६० रनले जितेको थियो । शरद भेषावकरको नटआउट ८२ रनमा नेपालले कोलम्बोमा भएको उक्त खेलमा ८ विकेट गुमाई २ सय ३४ रन बनाएको थियो ।
कोर्नवाल क्रिकेट लिगमा ९ टिम छन् । पाँचौं स्थानमा रहेको सुशनको टिमले २ खेल खेल्न बाँकी छ । शनिबार न्युक्वुसँग खेलेपछि फालमाउथले अर्को शनिबार सेन्ट जस्टसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ । त्यसपछि सुशन सेप्टेम्बर १२ मा नेपाल फर्किनेछन् । बुटवल कालिकानगर घर भएका सुशनले इंग्ल्यान्डमा क्लब क्रिकेट क्लब खेल्ने क्रममा ९ विकेट लिइसकेका छन् ।
सुशनले २०१३ मा मलेसियामा एसीसी यू–१९ कप र यूएईमा एसीसी यू–१९ एसिया कपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सदावहार खेलाडी शक्ति गौचनका ‘चेला’ सुशन वैशाखमा काठमाडौंमा भएको नामिबियाविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेलमा नेपाली टिममा परेका थिए । तर दुवै खेलमा उनले खेल्न पाएका थिएनन् । नेपाली टिममा उनकै गुरु शक्तिसहित वसन्त रेग्मी र सन्दीप लामिछानेको स्पिन बलिङमा दबदबा छ । ‘राष्ट्रिय टिममा एक पटक परियो, खेल्न पाइएन । अब खेल्ने हिसाबमै टिममा आउँछु । अहिले इंग्ल्यान्डको अनुभव बटुलेको छु, चाँडै राष्ट्रिय टिममा आउँछु जस्तो लागेको छ,’ सुशनले भने, ‘प्रदर्शन राम्रो गरे टिममा आउन सकिन्छ । तर अहिलेको स्थितिमा सजिलो भने छैन ।’
टोकियो विमानस्थलबाट गैरखेलाडी बेपत्ता
काठमाडौं: मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेलका लागि जापान लगेर उतै छाडिएका गैरखेलाडीमध्ये आधाभन्दा बढी टोकियो विमानस्थलबाटै गायब भएको खुलेको छ । नेपाली क्रिकेट टोलीसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ ट्रान्जिट हुँदै जापानको टोकियोस्थित नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका गैरखेलाडी त्यसपछि एकाएक गायब भएका थिए ।
क्रिकेटका नाममा ‘मानव तस्करी’
छानबिन गर्न खेलकुदमन्त्री र आईसीसीको निर्देशन
काठमाडौंः जापानमा हालै सम्पन्न एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन गएको टोलीमा केही गैरखेलाडीलाई समेत सहभागी गराइएको र उनीहरूलाई जापानमै छाडेर आएको आशंकामा छानबिन अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले नेपाली क्रिकेटका सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।
यस विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले समेत विशेष चासो देखाउँदै आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । गत १५ जुलाईमा नेपालको बेस्ट फुटबल क्रिकेट (एफसी) काठमाडौं क्लबले सातजना राष्ट्रिय खेलाडीसहित १८ सदस्यीय टोली जापान लिएर गएको थियो ।
जापानमा उनीहरूले स्थानीय क्लबसँग दुई दिनमा तीनवटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका थिए । उक्त मैत्रीपूर्ण खेलका लागि सिनियर नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वसदस्य सिद्धान्त लोहनीसहित यू १९ टोलीका प्रेम तामाङ, अमित श्रेष्ठ, सौरभ खनाल, फैजल खान, रामनरेश गिरी र राष्ट्रिय खेलाडी सोनु तामाङ जापान गएका थिए ।
मैत्रीपूर्ण खेलका लागि जापान गएकामध्ये सातैजना खेलाडी र अन्य दुई पदाधिकारी पाँच दिनको बसाइपछि नेपाल फर्किएका थिए । टोलीसँगै जापान गएका अन्य नौजना भने आफूहरूसँग नेपाल नफर्किएको एक खेलाडीले बताए ।
‘हामी १५ दिनको प्रवेशाज्ञासहित मैत्रीपूर्ण खेलका लागि जापान गएका थियौं तर हामी सात खेलाडी र दुईजना पदाधिकारी पाँच दिनपछि नेपाल फर्कियौं’, ती खेलाडीले भने, ‘खेल्न भनेर गएका अन्य नौजना भने हामीसँग फर्किएनन् ।’
ती खेलाडीका अनुसार जापान गएका अन्य नौमध्ये दुईजनाले मात्र त्यहाँ मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका थिए । एकजनाले दुई खेल खेले भने अर्का एकजनाले एक खेलमात्र खेलेका थिए । ‘एक दिनमा बिहान र बेलुका गरी दुई खेल खेलाइएको थियो । त्यसमा हामी सातजनाबाहेक अन्य नौजनामध्ये दुईले मात्रै खेले ।
एकजनाले दुई खेल र अर्का एकले एक खेलमात्र खेले’, उनले भने, ‘अहिले जापानमै रहेका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी राजकुमार प्रधान र अन्य उतैका खेलाडीले पनि हाम्रो टोलीबाट खेलेका थिए ।’
खेलाडी भन्दै टोलीसँग गएका नौजनालाई आफूहरूले नचिनेको ती खेलाडीले बताए । ‘उनीहरूलाई हामीले त्यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनौं । एउटै टोलीको ड्रेस लगाएर गए पनि उनीहरू को हुन् भन्ने हामीमध्ये कसैले थाहा पाएनौं ।
ती नौजनासँग जापान पुग्दासम्म पनि हाम्रो बोलचाल भएन’, उनले भने, ‘हामी सातजना खेलाडी पहिले नै विमानस्थल पुगेका थियौं । अन्य खेलाडीबारे सोध्दा आउँदैछन् भन्ने जबाफ पायौं । केही समयपछि जिउडाल नै नमिलेकाहरूलाई खेलाडी भनेर हाम्राअगाडि ल्याइएको थियो ।’
पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटको नियमनकारी निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नै आईसीसीबाट निलम्बनमा परेपछि आलोचित बनेको नेपाली क्रिकेटसँग जोडिएर सार्वजनिक भएको पछिल्लो घटनाप्रति खेलाडीहरूसमेत गम्भीर देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्कालगायत खेलाडीले पछिल्लो समय जापान गएर फर्किएका सातजना खेलाडीसँग उक्त विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूले जापानमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा कप्तानको भूमिका निर्वाह गरेका सिद्धान्त लोहनीलगायत खेलाडीसँग लिखित जबाफसमेत लिइसकेका छन् ।
खेल्न भनेर जापान गएका अन्य नौजना हामीसँग फर्किएनन् ।
आईसीसीका एसिया हेर्ने विकास निर्देशक बन्दुला वार्नपुराले सोही विषयमा नेपाली खेलाडीसँग स्पष्टीकरण सोध्न राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटालाई निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुसार खेलाडीसँग लिखित जबाफ मागिएको बताइएको छ । क्यान निलम्बनमा परेपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको व्यवस्थापक तोकिएका बन्दुला नेपाली टोली हेर्ने आईसीसीका विशेष प्रतिनिधि पनि हुन् ।
‘बर्नापुराले जापान खेल्न गएका खेलाडीसँग प्रशिक्षकको हैसियतमा स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएका छन्’, टमाटाले भने, ‘त्यसअनुसार नै सम्पर्कमा आएका केही खेलाडीसँग स्पष्टीकरण सोधिसकिएको छ र अन्यसँग पनि सोधिनेछ ।’
यसैगरी खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले समेत उक्त घटनाबारे उजुरी आएकाले त्यस सम्बन्धमा आफूले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको बताएका छन् । ‘खेलाडीका नाममा केहीलाई जापान लगेर छाडिएको भन्ने सूचना मैले पाएको छु । त्यसबारे उजुरीसमेत आएको छ’, मन्त्री श्रीपालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यो घटनामा विशेष अनुसन्धान हुन्छ र सत्यतथ्य पत्ता लगाई संलग्नमाथि कडा कारबाही गरिनेछ । खेलकुद भनेको मानवतस्करी गर्ने अखडा होइन ।’
जापानमा खेलाडीले बेस्ट फुटबल क्रिकेट (एफसी) काठमाडौं क्लबकै जर्सी लगाएर खेलेका थिए । उक्त क्लबका प्रतिनिधि सुन्दर थापाले भने टोलीसँग नफर्किएका नौजनाका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
ती नौजनालाई आयोजकले नै जापान लगेको दाबी पनि उनले गरे । ‘जापान क्रिकेट संघका पदाधिकारीले मसँग कुरा गरेका थिए । सोहीअनुसार हामीले राष्ट्रिय टोलीका सात खेलाडी लिएर गएका थियौं । हामी प्रतियोगिता खेलेर पाँच दिनमै फर्कियौं’, उनले भने, ‘तर अन्यबारे हामीलाई जानकारी छैन । उनीहरू आफ्नै तरिकाले गएका हुन् ।’
नेयमारको पेनाल्टी गोलसँगै ब्राजिलले फुटबलमा स्वर्ण जित्यो
५ भदौ, काठमाडौं । नेयमारको विजयी पेनाल्टीसँगै जर्मनीलाई हराउँदै ब्राजिलले रियो ओलम्पिक अन्तरगत पुरुष फुटबलमा स्वर्ण पदक जितेको छ ।
पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिलले ओलम्पिकको फुटबलमा स्वर्ण जितेको यो पहिलो पटक हो ।
घरेलु टोली ब्राजिलले जर्मनीलाई पेनाल्टीमा ५-४ ले हरायो । र, दुई वर्ष अघि विश्वकपको सेमिफाइनलमा व्यहोेरेको ७-१ को हारको बदलासमेत लिएको छ ।
निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल १-१ गोलको बराबरीमा सकिएको थियो । पेनाल्टी सुट आउटमा जर्मनीका निल्स पिटरसनको प्रहार ब्राजिलका किपरले रोके ।
ब्राजिलका लागि कप्तान नेयमारले विजयी गोल गरे ।
जसले जिते ओलम्पिकमा ‘ट्रिपल ट्रिपल’ स्वर्ण, बनाए रेकर्ड
तीव्र गतिका धावक उसेन बोल्टले रियो ओलम्पिकमा कीर्तिमानी तेस्रो स्वर्ण जितेका छन् । यससँगै उनले लगातार तीन ओलम्पिकमा तीन स्वर्ण जितेका छन् ।
बोल्टको प्रेरणामा जमैकाले शनिबार रियो ओलम्पिकको ४ गुणा १०० मिटर रिलेमा स्वर्ण जितेको छ । दौड पुरा गर्न जमैकाको टोलीलाई ३७.२७ सेमेण्ड समय लागेको थियो ।
रियो ओलम्पिकमा बोल्टले १०० मिटर र २०० मिटरमा स्वर्ण जितिसकेका छन् । सन् २००८ को बेइजिङ र २०१२ को लण्डन ओलम्पिकमा पनि बोल्टले तीन वटै स्पर्धामा स्वर्ण जितेका थिए ।
रियो ओलम्पिकमाः नाचेर मन जिते भारोत्तोलकले
एजेन्सीः जारी रियो ओलम्पिक खेलकुदअन्तर्गत भारोत्तोलनको एक सय पाँच केजीभन्दा माथिको तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा सानो देश किरिबातीका खेलाडी डेभिड काटोएटउले दर्शकको निकै साथ पाए ।
उनलाई दर्शकले यति रुचाए कि आयोजक राष्ट्र ब्राजिलको खेलाडीलाई भन्दा बढी हुटिङ उनले पाएका थिए । त्यसको एउटै कारण थियो, डेभिडको फरक व्यवहार ।
उनी जतिपटक भार उठाउन स्टेजमा उत्रिन्थे, त्यति नै पटक नाचेर दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउँथे । उनी भार उठाउनुअघि र फर्कने बेला एकपटक नाचेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिन्थे । त्यसैले प्रतिस्पर्धा हेर्न उपस्थित दर्शकले अन्य प्रतिस्पर्धी खेलाडीका लागि भन्दा डेभिडका लागि बढी ताली बजाए । प्रतिस्पर्धाका क्रममा नाचेर दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउनु डेभिडको पुरानै स्वभाव हो ।
दुई वर्षअघि स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा सम्पन्न कमन्थवेल्थ खेलकुदअन्तर्गत यही स्पर्धामा स्वर्ण पदक जितेका डेभिडले त्यहाँ पनि नाचेरै दर्शकको मन जितेका थिए । त्यति बेलाको आफ्नो व्यवहारबाट भारोत्तोलनप्रेमी दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय बनेका डेभिड यसपटक पनि रियो ओलम्पिक सुरु हुनुअघिबाटै चर्चामा थिए । रियो ओलम्पिकमा भारोत्तोलनको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनुअघि नै उनी फेसबुक र ट्विटरमा छाइसकेका थिए ।
रियोमा उनी विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीसँगको प्रतिस्पर्धामा अघिल्लो चरणमै रोकिएका थिए । तर, यसपटक पनि उनले दर्शकको मन भने जितेरै छाडे । डेभिडले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका क्रममा यस्तो व्यवहार गर्नुको पनि विशेष कारण रहेछ, उनीसँग । उनको देश किरिबाती निकै सानो छ । किरिबातीको नाम सुन्ने पनि विश्वमा निकै कम छन् । किरिबाती सानोमात्रै छैन, बर्सेनि समुद्रमा डुब्दै आफ्नो क्षेत्रफल पनि घटाउँदैछ ।
उनको देशका जनता बारम्बार सामुद्रिक बाढीको सिकार बन्ने गरेका छन् । गत वर्ष डेभिड आफैंले पनि सामुद्रिक बाढीकै कारण आफ्नो घर गुमाएका थिए । ग्लासगोमा सम्पन्न कमनवेल्थ गेम्समा स्वर्ण पदक जितेबापत राज्यले उनलाई ११ हजार अमेरिकी डलर रकम पुरस्कार दिएको थियो । सोही रकमले उनले आफ्नो अभिभावकका लागि घर बनाएका थिए । तर, सो घर त्यही सामुद्रिक बाढीले ध्वस्त बनाइदियो । त्यसयता उनी घरविहीन छन् ।
भूगर्भविद्हरूले केन्द्रीय प्यासिफिक राष्ट्र किरिबाती चाँडै नै समुद्रभित्र विलीन हुने बताएका छन् । त्यसैले डेभिडले आफ्नो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परिचित गराउन पनि यस्तो व्यवहार गरेका हुन् । ‘प्रायः लाई किरिबाती कहाँ छ भन्नेबारे थाहासम्म छैन’, डेभिड भन्छन्, ‘म विश्वभरिका मान्छेले किरिबातीबारे सुनून् भन्ने चाहन्छु । त्यसका लागि म भारोत्तोलन खेलाडी बनेको हुँ र त्यसकै लागि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका क्रममा नाच्ने पनि गर्छु ।’
उनले गत वर्ष आफू र आफ्नो देशको अवस्थाबारे जानकारी दिन खुला पत्र लेखेको स्मरणसमेत गरे । ‘हामीसँग हामी आफंैलाई बचाउने स्रोत छैन । हाम्रो देश किरिबातीसँग त्यस्तो स्रोत छैन’, डेभिड प्रश्न गर्छन्, ‘जीवन बचाउने स्रोत नै नभएको किरिबातीमा अन्य सुविधा के होला ? मैले खेल्न सुरु गर्दा देशमै जिम हल थिएन । अहिले पनि छैन ।’ उनले आफूले खुला सामुद्रिक तटमा अभ्यास गर्ने गरेको समेत उनले सुनाए ।
पारसको कप्तानी पारीसँगै नेदरल्याण्ड्समाथि नेपालको महत्वपूर्ण जित
३१ साउन, काठमाडौं । पारस खड्काको कप्तानी पारीको मदतमा नेपालले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेदरल्याण्ड्समाथि १९ रनको महत्वपूर्ण जित हात पारेको छ ।
पहिलो खेलमा ७ विकेटको हार व्यहोरेको नेपालको यो जितसँगै शीर्ष चारमा पर्ने सम्भावना कायमै छ । नेदरल्याण्ड्सको भने ८ खेलमा यो पहिलो हार हो
टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले पारसको ८४ रनको मदतमा २१७ रन बनाएको थियो । जवाफमा मैदान उत्रिएको घरेलु टोली अन्तिम ९ बल खेल्नु अघि नै १९८ रनमा अलआउट भयो ।
अन्तिम दुई ओभरमा उसलाई २३ रन चाहिएको थियो । तर, दोस्रो बलमा सोमपालले विकेट लिए । तेस्रो बलमा मलिक रन आउट भएपछि नेपालले १९ रनको जित हात पारेको छ ।
खराब सुरुवात गरेको उसले आठौं ओभरमा मात्र २१ रन जोड्दा ३ विकेट गुमाइसकेको थियो । मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानले पारी सम्हाले । रे भान डेरले ५६ रन बनाए भने गुर्जितर्सले ४४ र ओडाउडले ३५ रन जोडे । यस्तै टी भान डेरले ३६ रन जोडे ।
नेपालका पारससँगै सोमपाल कामी र बसन्त रेग्मीले २-२ विकेट लिए । शक्ति गौचन, सन्दिप यलामिछाने र सागर पुनले १-१ विकेट हात पारे ।
नेपालको पनि सुरूवात राम्रो थिएन । ६५ रन जोड्दा ३ विकेट गुमाएको थियो । तर, पारस खड्का र सागर पुनले नेपाली पारी सम्हाले । उनीहरुले चौथो विकेटका लागि ११८ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरे ।
कप्तान खड्का ८४ रनमा आउट भए । पुनले ४५ रन जोडे ।उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ३९ रन बनाएका थिए । विनोद भण्डारीले १७ रन बनाए भने अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।
घरेलु टोलीका लागि भान मिकेरनले ३ तथा किङ्मा र रिपोनले २-२ विकेट लिएका छन् ।
नेदरल्याण्ड्स ८ खेलबाट १२ अंकका साथ शीर्ष स्तानमा छ । दोस्रो स्थनमा रहेको हङकङको ९ र तेस्रो स्थानमा रहेको स्कटल्याण्डको पनि ९ अंक नै छ । तर, स्कटल्याण्ड ७ खेल खेलेको छ भने हङकङले ६ खेल मात्र खेलेको छ । पपुवा न्यूगिनीको ८ अंक छ । नेपाल र केन्याको समान ६ ६ अंक भएको छ । तर, केन्या पााचौ र नेपाल छैटौं स्थानमा छ ।
नेपाल आज नेदरल्याण्ड्ससँग भिड्दै शीर्ष चारमा पुग्ने लक्ष्य
२९ साउन, काठमाडौं । विश्व क्रिकेट लिग (डब्लुसिएल)को शीर्ष चार स्थानमा पुग्ने लक्ष्यका साथ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो पौने ४ बजे हुनेछ ।